रबिन थपलिया । छहरे– टोखा सडकको यो फोटो देखाएर केहि दिन देखि एउटा समुह र केहि व्यक्तिले व्यवसायनै चलाएको छ । बिहान देखि बेलुकी सम्म कहिले कता, कहिले कता, फोटा राख्ने अनि नेताद्धय डा. रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीहरुको सत्तोन सराप गर्ने । यो फोहोरी खेल नुवाकोटबाट राजनीति गर्ने नेताहरुले गरे भनेर म भन्दीन किन कि उनिहरुले यसरी तल्लो स्तरमा उत्रिएर नेता महत र केसीलाई गाली गरेको मैले सुनेको छैन । यो तिनै नेताका आसेपासे र धुपौरेहरुबाट भएको हो । आफनो नेताको नाम नजोड आफनो पछि चारजना लगाउन नसक्नेहरुले काँग्रेसका यि दुई नेतालाई गाली गरेर आफनो नेता रिझाएर धन्दा चलाउन भ्रमको खेति गरीरहेको यथार्थ स्पष्ट देखिन्छ ।
मेरो गाँउ देखि सहर र शहर देखि गाँउ जाने यो बाटोको बारेमा थोरबहुत मैले पनि जानकारी राखेको छु । यो बाटो खनिए देखि कालोपत्रे भएको सम्म देख्ने आँखा यिनै हुन् । कस्ले खन्यो र कालो पत्रे ग¥यो इतिहाँस साक्षी छ । अविरल बर्षासंगै यस बर्ष छहरे टोखा सडक धेरै बिग्रीएको यथार्थ हो । गतबर्ष भन्दा यो बर्ष अझै धेरै भत्कीयो, बाटो भासीयो र खाल्टाखुल्टी पनि धेरै भयो । जस्ले गर्दामा यातायातबाट सहज रुपमा आवत जावत गर्न निकै कठिन भयो । यो कठिन परिस्थीतिलाई भ्रमीत पारदै आफना नेता रिझाउन चाकडी गर्नेहरुले त्यस बेला कहाँ कहाँ आवाज उठाए ? असार–साउनमा हिलो भएर यातायात अवरुद्ध भएको छहरे–टोखा सडक चुनावको नजिक आएर देख्नेहरु हो के यो सडक बषौं देखि यस्तै थियो ? सडक पिच भएको थिएन ? बिगतका बर्षमा पनि यस्तै अवस्था थियो त ? छहरे टोखाको सडकलाई यो हालतमा पु¥याउने को ? हिजो सडक बन्दा र पिचको काम हुंदामा जनतालाई दुख हुन्छ भनेर नदेखि ठेकेदार र कम्पनीबाट लाखौंको चन्दा उठाउने कुन कुन पार्टी हुन ? कुन कुन नेता हुन ? जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरुले सडक पिच हुंदामा एक दिन गएर नहेर्ने र नदेख्नेहरु जेष्ठमा पिच गदै गरेको ठाँउ आज खाल्टोमा पानी जमिरहेको छ के त्यो पनि त्यहाँको संसदले बसेर डिउटी गरिदिनुपर्ने हो ?
भुकम्प र बर्षा लगायतका कारणले नुवाकोटका सडक मात्र होइनन् देशका कयौं ठाँउको सडकको अवस्था यो भन्दा कम थिएन् । नुवाकोट मात्र होइन काठमाडौंसंग सिमाना जोडिएको धादिङको जिवनपुरमा असार–साउनमा एक महिना पनि नियमीत गाडी गुडेन । काठमाडौंको सितापाईला देखि १५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको सडकको हालत यस्तो थियो । त्यहाँ कुन पार्टीले जित्यो, कस्ले हा¥यो त्यहाँको जनतालाई थाहा होला । के बर्षायाममा बाटो बिग्रनु र गाडी नचल्नु त्यहाँका जनप्रतिनिधिको दोस हो ?
छहरे–टोखाको सडकको दुर्दसा देख्नेहरुले ठमेलमा सडकमा धान रोपेको फोटो हेरेकी हेरेनन होला ? देशको राजधानी ठमेल सहित काठमाडौंको सडकको अवस्था दयनीय रहेको हामीमाझ र्छलंग रहेको छ । सडक र्निमाण हुन्छ, भत्कन्छ त्यो स्वभाबीक कुरा हो । त्यसलाई संरक्षण गर्ने, मर्मत गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सबैको हो । यो बर्ष असार देखि भदौ सम्म छहरे टोखा सडक मैले १३–१४ पटक प्रयोग गरें । यो सडकको दुर्दसाको बारेमा पटक पटक समाचार लेख्ने मध्यको म पनि एक हुं ।
बर्षा याममा नुवाकोटका जनताले काठमाडौंमा आउन ज्यानकै बाजी मानुपर्ने अवस्था थियो । यो बिचमा सञ्चारमाध्यमहरुमा कुरा पनि उठेका हुन् । यो फोटो देखाएर बिशेषत नुवाकोट क्षेत्र नं १ र क्षेत्र नं २ बाट र्निवाचनमा उठेका नेताद्धय डा. रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसी प्रति सत्तोसराप गर्ने अनि नुवाकोटको बिकासमा बाधकनै हुन भनेर आरोप लगाउनेहरु प्रति मेरो जिज्ञासा । के नुवाकोटको बिकास र्निमाण गर्ने जिम्मा यि दुई नेताको मात्र हो ? नुवाकोटमा जनताको नाममा राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु कोहि थिएनन् त ? डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीहरु नुवाकोटको बिकास बिरोधी भइरहंदा जनताको सेवा गर्ने अरु राजनीतिक पार्टीहरु के हेरेर बसिरहेका थिए त ? छहरे–टोखा सडकको चर्चा भएकाले त्यसै आसपासका बिकासलाई मात्र हेर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकाको सिमाना हुंदै तादीमा गएर मिस्सीएको लिखु खोलामा मात्र करोडौंका योजनामा दर्जनौं पुल बनेका छन्, नेपालको सवै भन्दा लामो झोलुंगे पुल छहरे कबिलास जोडने पुल त्यही बनेको छ, थान्सीङमा स्मार्ट सिटी बन्ने प्रकृया सुरु भइरहेको छ, मध्यपहाडी लोकमार्ग नुवाकोट हुंदै फैलिएको छ । के यि बिकास नभएर बिनास हुन ? भद्रुटारको चुवानडाँडामा हाल पञ्चकन्या गँउपालकामा २०५२–५३ सालमा डा. रामशरण महतको पहलमा स्थापना गरिएको टेलिफोन माओवादीद्धन्द कालमा पटक पटक ध्वस्त पारीयो । अहिले सम्म त्यहाँ टेलिफोन जडान गरिएको छैन् । काठमाडौंमा टेलिफोन जोडन बषौं कुर्नुपर्ने बेलामा भद्रुटारमा टेलिफोन चल्दामा के त्यो बिकास थिएन ? छहरेमा स्मार्ट सिटी बनाउने परिकल्पना, ठाँउ ठाँउमा बिजुली बत्ती, सडक, खानेपानी, विद्यालय ति बिकास हैनन ? २०५३–५४ सालमा नुवाकोटको थानापति ९ सत्तरी बजारमा कक्षा पाँच सम्म चल्ने निजी विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । बुर्जुवा शिक्षा दिनुहुंदैन भन्दै तात्कालीन बिद्रोही समुहले धम्की दिएपछि बन्द गरिएको सत्तरीको बालकुञ्ज बोडिङ बन्दनै भयो ।
मैले यि सब किन जोडे भने आजको दिन सम्म नुवाकोटमा चाहेको जति बिकास हुन नसकेको यथार्थ सत्य हो । तर, नुवाकोट लगायत देशको बिकास नेपाली काँग्रेसले गर्दामानै नभएको हो त ? माओवादी जनयुद्धमा नयाँ नेपाल बनाउने भन्दै भएका बिकास र्निमाण, भौतिक संरचना, उद्योगधन्दा, कलकारखान कतिपय ध्वस्त भए, बन्द भए हामीमाझ यो यथार्थ र्छलंग छ । माओवादी जनयुद्ध के कारणले भयो त्यो अर्कोपाटो छ । जनयुद्धसंगै जनतामा चेतनाको स्तर बढाएको यथार्थलाई कसैले भुल्न हुन्न् । द्धन्दको क्रममा आज नुवाकोटको बिकास नदेख्ने राजनैतिक पार्टी र तिनका आसेपासेहरु कति दिन आफनो गाँउमा बसे ? जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरु काठमाडौंमा बसेर गाँउका जनतासंग हालखबर बुझने बाहेक केहि गरेनन यो यथार्थ हो । द्धन्दको बेलामा आफु गाँउ नर्फकने, सहरमा बसेर हालखबर बुझनेहरुले जिल्लामा फलानो नेताले बिकासै गरिदिएन भनेर आरोप लगाउनु र्तकसंगत हुंदै होइन् ।
यहाँ कोहि कसै प्रति आरोप, प्रत्यारोप र पुर्वाग्रह भन्दा पनि बास्तवीक यथार्थ त्यही हो । नुवाकोटको बिकास बिरोधी नेता डा. महत र केसी भन्ने आरोप लाईरहंदा नुवाकोटको ६१ गाँउ बिकास समिति र १ नगरपालीकामा आज सम्म कुन कुन दलले नेतृत्व गरे । अनि नुवाकोटका यस अघिका तिन वटा संसदीय र्निवाचन क्षेत्रमा कुन कुन राजनैतिक दलले कति पटक चुनाव जिते ? त्यसलाई हेर्दामा आज बिकास बिरोधी भनेर आरोप लगाउनेहरुको जबाफ त्यही भित्र छ ।
नुवाकोटमा आज सम्म संसद र स्थानीय निकायमा काँग्रेसले मात्र चुनाव जितेको हो त ? नुवाकोटबाट डा. महत र केसि मात्र मन्त्री र संसद भएका हुन त ? नुवाकोटमा बिकास हुन नसक्नुमा नुवाकोट काँग्रेस र नेताद्धय मात्र जिम्मेवार छन त ? अवश्य छैन् । डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीका केहि पछौटेहरुले छहरे–टोखा सडक हाम्रो पहलमा खनिएको हो भनेर दावी गरेका छन् । बिकास जस्ले गरेपनि राम्रो कुरा हो । डा. लोहनीले गरे गरेनन त्यो इतिहाँसले बताउला तर आफुले सुरु गरेको सडकको त्यो दुर्दसा हुंदामा डा लोहनी के के पहल गर्नुभयो ? डा. लोहनी संसद थिएनन भन्ने तर्क आउला । के राजनीति संसद र मन्त्री बन्नको लागि मात्र गर्ने हो त ? होइन भने छहरे टोखाको सडकको त्यो दुर्दसा हुंदा सम्म नुवाकोटमा राजनीति गर्ने अरु राजनीतिक दलहरुले के पहल गरे ? चुनाबको बेलामा सडकको दुर्दसा देखाएर भ्रमका खेति गर्नेहरुले बर्षाको समयमा कष्ट गरेर यात्रा गर्ने नुवाकोटको जनताको लागि के पहल गरे ? सडकमा बस चिप्लीएर खस्नै लाग्दा कति सावेल माटो हाले ? राजनीति गर्न र भन्नका लागि मात्र होइन, यथार्थमा गरिनुपर्दछ । त्यो जनताले पनि पत्याउ सक्ने खालको ।
त्यसैले, नुवाकोटको बिकास र्निमाण हुन नसक्नुमा सबै राजनैतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार छन् । नुवाकोटबाट राजनीति गरेर जितेका कारण नुवाकोटका नेताद्धय अलि बढी समय सत्तामा बसे होलान् । त्यसको बढी जिम्मेवार उनिहरु हुंनै पर्दछ । नेपाली काँग्रेस नुवाकोटको राजनीतिमा परिवारबाद हावी भइरहेको यथार्थपनि हो । परिवारबाद हावी भयो भन्दैमा राजनीतिमा कुनै योग्दाननै नगरेकालाई स्थान दियो भन्ने पनि होइन् । त्यसैले राजनीति गरौं तर डा. बाबुराम भट्टराईले भनेको जस्तो के को टाउको देखाएर के बेचेको भने जस्तो गरि नगरौं ।